Sehatra YouTube telo (3) amin’ny teny malagasy, mampivoatra sy mampandroso – Blaogin'i Voniary
Tsy vitsy ireo sehatra youTube mivoy ny teny malagasy. Saingy matetika hatsikana, tsahon’olo-malaza na politika no maro amin’izy ireny. Indreto ary misy sehatra telo notsongaiko ho an’ireo izay maniry hiaino sy hijery fandaharana amin’ny teny malagasy miompana amin’ny fapivelarana ny isam-batan’olona ary tsy hadinoina indrindra ny fandalana ny fomba malagasy sy ny fitiavan-tanindrazana.
Tsanta Gaelle Ramamonjisoa
Anisan’ny olona mahafinaritra ahy i Gaelle ary efa nentiko teto ny momba azy. Tovovavy be angovo, be fitiavana ary be herim-po izy ary indrindra tia mizara. Zarainy ao anatin’io sehatra Youtube kirakirainy io ny traikefam-piainany izay hampitany hafatra mankahery sy mahasoa. Ohatra amin’izany ireto: “hafatra ho an’ireo tsy matoky tena sy mihevitra ny tenany ho tsy mahavita azy”, “tsy hamono tena intsony aho”, “ahoana kay no ahalalana ny tena talentako?”.
“Tiako mba ho tsapanao fa sarobidy ny fisianao eto ambonin’ny tany ary afaka manatanteraka zavatra tsara ianao eo amin’ny fiainanao”
Mpankafy teny anglisy ihany koa izy. Nahafahany nitety firenena maro sy nampivelatra azy eo amin’ny sehatry ny asa ny fahaizany io teny io ka tsy misalasala izy mizara fika hahaizana teny anglisy. Fa ambonin’izany rehetra izany, mirehareha amin’ny maha-malagasy azy izy ary asehony amin’ny fotoana rehetra izany. Maneho izany indrindra ilay horonantsary “Isika tompon’i Madagasikara no tokony hitia azy voalohany”.
Sehatra manolotra sakafon-tsaina sy sakafom-panahy ny sehatr’i Hasina Samoelinanja. Angano mampisaina, tantara mitondra fananarana ary hafatra momba ny fampivelarana ny isam-batan’olona no atolony ao. Ny anganon’ny Ntaolo no avaoziny hifanaraka amin’izao vanimpotoana iainantsika izao toy ny : Ralakambomanga, ny fanahy no maha-olona. Ny tanjony dia ny mba hamelona ny angano sy ny fomba malagasy.
Misy ihany koa anefa ireo tantara avy amin’ny traikefam-piainany na tranga hitany teny rehetra teny toy ny “sahia miavaka amin’ny tsara”, “ny hazo avo tsy maintsy manana faka lalina”. Narafiny amin’ny endrika kanto izy ireny mba hampitana hafatra ho an’ny tanora malagasy: .
“Ny voan-dalana tsara indrindra dia tsy ilay miditra ao am-paosy na miditra ao an-kibo fa ilay miditra ao an-tsaina”
Mpampiofana amin’ny fampivoaran-tena, poeta ary mpihira i Hanta Ramakavelo. Atolony amin’ny endrika tononkalo na hira ny hafatra fanairana hambom-po sy fanentanana isan-karazany. Lohahevitra voiziny ny hoe “azonao atao ny manatsara tantara” izay navoakany boky.
“Azonao atao izay rehetra irinao, azonao atao izay irin’ny fonao ao ka mazava ao an-tsainao. »
Ankoatrany ao amin’ny YouTube dia manolotra horonantsary fohy ihany koa izy ao amin’ny pejy facebook arindrany. Matetika, isaky ny alatsinainy maraina izy no mitondra ny “alatsinainy mahafinaritra” mba hizarany hafatra mankahery sy manome angovo iatrehana ny herinandro vaovao.
Mpandala ny kolontsaina malagasy ihany koa i Hanta Ramakavelo ary hita taratra amin’ireo tononkalony maromaro izany.
Ankafiziko manokana: Vazaha miteny gasy
Tsy Malagasy velively i Hasina (Hansen) sy i Tiana (Austin) saingy babo tanteraka tamin’ny kolontsaina malagasy sy ny teny malagasy izy ireo. Mpirotsaka an-tsitrapo Amerikanina tao amin’ny Peace Corps izy ireo ary niaina roa taona teto amintsika. Na dia efa tapitra aza ny iraka nataony teto dia mbola mahatsiaro an’i Madagasikara izy ireo ka izany no antony nananganany io sehatra Vazaha miteny gasy io.
Manentana antsika Malagasy hitia ny kolontsaintsika (teny, fomba, tantara..) izy ireo ao anatin’ny horonantsariny. Misy horonantsary iray izay anehoany ny fomba fiarahabana amin’ny fitenim-paritra maro, tena nanohina ahy tokoa. Mizara hafatra ho an’ny rehetra koa i Hasina sy i Tiana mba hijoro amin’ny maha-izy-azy ny tsirairay ary handray an-tanana ny fiainany.
Mahagaga fa ny vazaha indray no manentana antsika hitia ny maha-malagasy antsika. Ary ny tena mahatsikaiky dia maro ireo fangatahana eny ambanin’ny horonantsary eny hoe mba ampianaro teny anglisy izahay.
Ireo ary ny sehatra YouTube 4 amin’ny teny malagasy mahafinaritra ahy ka satriko zaraina aminao. Ary ny anao? Inona ny sehatra YouTube mahaliana anao?
développement personnel gasy, fampivelarana ny maha-olona, fampivoaran-tena, fampivoarana ny maha-olona, YouTube Gasy, YouTube teny gasy